Gobolka Iowa ayaa qorsheynaya inuu soo bandhigo degel cusub beri si loo helo macluumaad dheeri ah oo | KWIT
Gobolku wuxuu kaloo qorsheynayaa inuu la xiriiro dadka waaweyn ee Iowans ee u baahan helitaanka tallaal. Laga bilaabo Maarso 8 waxay furi doonaan xarun wicitaan 211 si ay uga jawaabto su'aalaha ugana caawiso jadwalka.
Gudoomiyaha koonfurta Dakota Kristi Noem (sida Rome oo kale) wuxuu kusii kordhayaa cadaadiska xeer ilaaliyaha guud ee gobolka inuu is casilo, isagoo balanqaaday inuu sii deyn doono dukumiintiyo badan oo baaritaan ah oo ku saabsan shilkiisii ​​dhimashada badnaa wuxuuna qortay xoghayaheeda amniga bulshada inuu ku biiro baaqa looga qaadayo xafiiska. Jason Ravnsborg (wareeg-burg) wuxuu ku dilay oo ku dilay nin waddo weyn oo miyi ah bishii Sebtember. Noem ayaa sheegtay inay go aansatay inay ugu yeerto Ravnsborg isbuucaan is casilaad kadib markay dib u eegis ku sameysay baaritaanka. Xoghayaha amniga bulshada ayaa sheegay inuu taageersan yahay xil ka qaadista lagu sameeyay Ravnsborg sababtoo ah "ilaalinta kalsoonida shacabka ayaa muhiim u ah" saraakiisha sharci fulinta.
Sharci dejiyeyaasha Iowa ayaa hormariyay sharciga gudoomiyaha heerarka shidaalka ee la cusboonaysiin karo ee ka baxsan guddiga Beeraha ee Senate-ka inkasta oo ay aaminsan yihiin inay u baahan tahay isbadal
Sharciga lagu muransan yahay wuxuu u baahan doonaa baatrool leh ethanol iyo shidaalka isku dhafan ee biodiesel ku dhowaad dhammaan bambooyin shidaal oo ku yaal Iowa. Laakiin waxay u oggolaaneysaa hal bambo oo ku yaal goob kasta inay ku iibiso baatrool aan lahayn shidaal-shidaal. Waxay sidoo kale kordhin doontaa dhibcaha canshuurta ee tafaariiqleyda.